2 PITA 3 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (2PI 3)
Ndị m hụrụ nꞌanya, nke a bụ akwụkwọ nke abụọ m na-edetara unu.
Ihe mbụ m chọrọ ichetara unu bụ nke a: matanụ na nꞌoge ikpeazụ ahụ ụfọdụ mmadụ ga-apụta, ndị ga-eme ihe ọjọọ ọ bụla ha nwere ike ichepụta nꞌuche ha. Ha ga-achịkwa eziokwu ahụ unu na-ekwusa ọchị.
Lee ụdị ihe ha ga-agwa unu, “Jisọs ò kwere unu nkwa na ọ ga-alọghachi ọzọ? Olee kwanụ ya? O nweghị nke ọ na-abịa! Leenụ kemgbe nna nna anyị ha biri ndụ nwụọ, ihe nile dịkwa otu ha dị site na mgbe e kere ụwa. Ọ dịghị ihe mgbanwe ọ bụla dị.”
Ebe ọ bụ na ihe nile gbara anyị gburugburu ga-esi otu a laa nꞌiyi, ụdị ndụ dị nsọ dị aṅaa ka anyị kwesịrị ibi? Ụdị ndụ ezi omume dịkwa aṅaa ka anyị kwesịrị ibi
Ma anyị na-ele anya mmezu nkwa ahụ Chineke kwere, nkwa inye anyị elugwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ ebe ezi omume nanị ga-adị.
2 PITA 3:1
2 PITA 3:3
2 PITA 3:4
2 PITA 3:6
2 PITA 3:10
2 PITA 3:12
2 PITA 3:13
2 PITA 3:16